Tsika SPY90-SPY120 Inoenderera mberi Yekutsanangudza Mugadziri uye Mutengesi | Dongshen
Mukati meEPS mbichana mbichana, pane irikufema gasi inonzi pentane. Mushure mekubira, pentane inotanga kuwedzera saka saizi yebead inowedzerawo kukura, izvi zvinonzi kuwedzera. EPS mbishi mbichana haigone kushandiswa kugadzira mabhuroko kana kurongedza zvigadzirwa zvakananga, marozari ese anoda kuwedzerwa kutanga wozoita zvimwe zvigadzirwa. Kuwanda kwechigadzirwa kunosarudzwa panguva yePreexpanding, saka kudzora kwehuwandu kunoitwa muPreexpander.
EPS Inoenderera Preexpander inoitwa kuwedzera EPS mbishi zvinhu kune inodiwa density, muchina unoshanda nenzira inoenderera munzira zvese mukutora mbishi zvinhu uye kuburitsa zvakawedzerwa zvinhu. EPS Inoenderera Pre-expander inogona kuita yechipiri neyechitatu kuwedzera kuti uwane yakaderera density.
EPS Inoenderera Preexpander yakakwana ne Screw Conveyor, Chekutanga uye chechipiri kuwedzera loader, Kuwedzera Kamuri, Fluidized bed Drier
EPS Inoenderera Preexpander rudzi rweEPS Machine inoshanda nema mechanical control. EPS mbishi zvinhu zvinotanga kuzadzwa kubva sikuru conveyor kusvika pakuwedzera kurodha Pazasi peanochengeta pane sikuruu, yekufambisa zvinhu kubva ku loader kuenda kuimba yekuwedzera. Munguva yekupfungaira, shaft inoshungurudza iri kufamba nguva dzose kuti iwedzere kuwanda kwezvinhu uye yunifomu. Mbishi zvinhu kuendesa mukamuri zvinoenderera, uye mushure mekutsvaira, nhanho yezvinhu inoenderera ichikwira kumusoro, kusvikira iyo nhanho yezvinhu yasvika padanho rakaenzana rekuburitsa chiteshi chekuvhura, ipapo zvinhu zvinobva zvangoyerera zvichibuda. Iyo yakakwira iko kuburitsa kwekuvhura kuri, iyo yakareba iyo zvinhu inogara mune dhiramu, saka iyo yakaderera iyo density iri; iko kuzasi kwekubuditsa kuvhura kuri, kupfupisa zvinhu zvinoramba zviri mudhiramu, saka iyo yakakwira iyo density iri. Iko kudzora kweye inoenderera pre-yekuwedzera muchina iri nyore kwazvo. Kunyangwe iyo yekumanikidza yekumanikidza yakagadzikana kana isina ine pesvedzero huru pane kuwanda kwekuwedzera. Naizvozvo, yedu inoenderera pre-yekuwedzera muchina yakagadzirirwa neJapan yekumanikidza kudzikisa vharuvhu. Kuti tiite kuti mhepo isvike mumushini igadzikane, isu tinoshandisa sikuruwa yekudyisa izvo zvinhu paunifomu yekumhanya, uye yunifomu hwemhepo uye yunifomu yekudyara yakafanana yunifomu sezvinobvira.
Kuenderera mberi Preexpander
Chinhu SPY90 SPY120
Imba yekuwedzera Dhayamita Φ900mm Φ1200mm
Vhoriyamu 1.2m³ 2.2m³
Inoshandiswa vhoriyamu 0.8m³ 1.5m³
Steam Kupinda DN25 DN40
Kushandiswa 100-150kg / h 150-200kg / h
Dzvinyiriro 0.6-0.8Mpa 0.6-0.8Mpa
Yakadzvanywa Mhepo Kupinda DN20 DN20
Abudise Kupinda DN20 DN20
Kuburitsa 15g / 1 250kg / h 250kg / h
Nyaya yekuendesa mutsara DN100 50150mm
Simba 10kw 14.83kw
Kuwandisa Kutanga kuwedzera 12-30g / l 14-30g / l
Kuwedzera kwechipiri 7-12g / l 8-13g / l
Kunopindirana divi L * W * H 4700 * 2900 * 3200 (mm) 4905 * 4655 * 3250 (mm)
Kurema 1600kg 1800kg
Kureba kwemakamuri kunodiwa 3000mm 3000mm
Pashure: PB2000V-PB6000V Vacuum mhando block block kuumba muchina
Zvadaro: DS1100-FDS1660 EPS Batch mhando pre expander